ရိုကျခံထိတဲ့သူကိုယျတိုငျ အရေးပျေါကားဆီ အပွေးလာခဲ့ရတဲ့ မျောလမွိုငျမွို့ ကြောကျမီးသှေးရုံထောငျ့က ရိုကျပှဲ… | 9han News
ရိုကျခံထိတဲ့သူကိုယျတိုငျ အရေးပျေါကားဆီ အပွေးလာခဲ့ရတဲ့ မျောလမွိုငျမွို့ ကြောကျမီးသှေးရုံထောငျ့က ရိုကျပှဲ…
ရိုက်ခံထိတဲ့သူကိုယ်တိုင် အရေးပေါ်ကားဆီ အပြေးလာခဲ့ရတဲ့ မော်လမြိုင်မြို့ ကျောက်မီးသွေးရုံထောင့်က ရိုက်ပွဲ
17.5.2020 ည(9:00)ခန့်က မော်လမြိုင်မြို့ ကျောက်မီးသွေးရုံ ငါးဈေးရှေ့တွင် လူတစ်ဦး အရိုက်ခံရ၍ သွေးထွက်ဒဏ်ရာများဖြင့် ထွက်ပြေးနေကြောင်း ဖုန်းဆက် အကူအညီတောင်းလာသဖြင့်….
မော်လမြိုင် RESCUE လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှ အရေးပေါ် ထွက်ခွာခဲ့ရာ ကျောက်မီးသွေးရုံမီးပွိုင့်အရောက်တွင် အရိုက်ခံရသူ လူနာမှ သွေးသံရဲရဲဖြင့် အရေးပေါ်ကားဆီ အားကိုးတကြီး အပြေးလာခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရသဖြင့် လူနာကို လိုအပ်သည့် ပြုစုမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ကူညီပေးခဲ့ရပါသည်။
READ မန္တလေးဆေးရုံကြီးတွင် သံသယလူနာ(၅)ဦးထပ်မံသေဆုံး၊ နှစ်ဦး၏ ဓာတ်ခွဲအဖြေတွင် COVID-19 ရောဂါမတွေ့ရှိ
ဖြစ်စဉ်အား အကြမ်းဖျဉ်းသိရသည်မှာ ကျောက်မီးသွေးဆိပ်ခံ တံတားတွင် အရိုက်ခံရသူလူနာနှင့် သူငယ်ချင်းများမှ အရက်ထိုင် သောက်နေကြစဉ် တဖက်မှ ထိုင်နေသူများနှင့် စကားများကြရာမှဝိုင်းရိုက်ခံရသဖြင့်ထွက်ပြေးလာခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကနဦးသိရပါသည်။
မော်လမြိုင်ကမ်းနားလမ်းက နေ့စဉ်စည်ကားလျှက်ပါပဲ။ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်း show of force ဖော်ရှိုး ခဏပဲ လှည့်ကင်းလှည့်တာပါပဲ။ တခါတလေ ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားတောင်မလာကြတဲ့အပြင် အကြောင်းကြားပေးသူကို ပုလိပ်စစ် အစစ်ခံနေရ တာလဲ ထုံးစံပါပဲ။
နောင်လဲ ဆက်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲ။သာမာန် အရပ်သားမပြောနဲ့။ ရဲတပ်ဖွဲ့မိသားစု ရဲတပ်ဖွဲ့စာရေးမတွေ အကြောင်းကြားတောင် မလာပါဘူး။ပြည်သူချစ်အောင် ပြည်သူအားကိုးထိုက်အောင် နေထိုင်လုပ်ကိုင်ကြပါ။
ပြည်သူ့စေတနာတွေ ရလာမှာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ မြင်ရင်မြင်တဲ့အတိုင်း ရေးတတ်ပါတယ်။တော်ရင်လဲတော်သလို ကောင်းရင်လဲကောင်းသလို ချီးကျူးပါတယ်။
ရိုကျခံထိတဲ့သူကိုယျတိုငျ အရေးပျေါကားဆီ အပွေးလာခဲ့ရတဲ့ မျောလမွိုငျမွို့ ကြောကျမီးသှေးရုံထောငျ့က ရိုကျပှဲ
17.5.2020 ည(9:00)ခနျ့က မျောလမွိုငျမွို့ ကြောကျမီးသှေးရုံ ငါးဈေးရှတှေ့ငျ လူတဈဦး အရိုကျခံရ၍ သှေးထှကျဒဏျရာမြားဖွငျ့ ထှကျပွေးနကွေောငျး ဖုနျးဆကျ အကူအညီတောငျးလာသဖွငျ့….
မျောလမွိုငျ RESCUE လူမှုကယျဆယျရေးအဖှဲ့မှ အရေးပျေါ ထှကျခှာခဲ့ရာ ကြောကျမီးသှေးရုံမီးပှိုငျ့အရောကျတှငျ အရိုကျခံရသူ လူနာမှ သှေးသံရဲရဲဖွငျ့ အရေးပျေါကားဆီ အားကိုးတကွီး အပွေးလာခဲ့သညျကို တှရှေိ့ရသဖွငျ့ လူနာကို လိုအပျသညျ့ ပွုစုမှုမြား ဆောငျရှကျပေးပွီး ဆေးရုံကွီးသို့ ပို့ဆောငျကူညီပေးခဲ့ရပါသညျ။
ဖွဈစဉျအား အကွမျးဖဉျြးသိရသညျမှာ ကြောကျမီးသှေးဆိပျခံ တံတားတှငျ အရိုကျခံရသူလူနာနှငျ့ သူငယျခငျြးမြားမှ အရကျထိုငျ သောကျနကွေစဉျ တဖကျမှ ထိုငျနသေူမြားနှငျ့ စကားမြားကွရာမှဝိုငျးရိုကျခံရသဖွငျ့ထှကျပွေးလာခွငျးဖွဈသညျဟု ကနဦးသိရပါသညျ။
မျောလမွိုငျကမျးနားလမျးက နစေ့ဉျစညျကားလြှကျပါပဲ။ရဲတပျဖှဲ့ကလညျး show of force ဖျောရှိုး ခဏပဲ လှညျ့ကငျးလှညျ့တာပါပဲ။ တခါတလေ ဖုနျးဆကျအကွောငျးကွားတောငျမလာကွတဲ့အပွငျ အကွောငျးကွားပေးသူကို ပုလိပျစဈ အစဈခံနရေ တာလဲ ထုံးစံပါပဲ။
နောငျလဲ ဆကျဖွဈနဦေးမှာပါပဲ။သာမာနျ အရပျသားမပွောနဲ့။ ရဲတပျဖှဲ့မိသားစု ရဲတပျဖှဲ့စာရေးမတှေ အကွောငျးကွားတောငျ မလာပါဘူး။ပွညျသူခဈြအောငျ ပွညျသူအားကိုးထိုကျအောငျ နထေိုငျလုပျကိုငျကွပါ။
ပွညျသူ့စတေနာတှေ ရလာမှာပါ။ကြှနျတျောကတော့ မွငျရငျမွငျတဲ့အတိုငျး ရေးတတျပါတယျ။တျောရငျလဲတျောသလို ကောငျးရငျလဲကောငျးသလို ခြီးကြူးပါတယျ။
ခြောကျမွို့ မွို့ဦးစတေီ အလှူခံ ပုံးေ ဖာကျလူသတျမှုကြူးလှနျသူကိုဖမျးမိ